Iyyaa iyya dabarsaa mootummaan Itoophiyaa ummata qeellam wallaggaa HELEKOPTERAAn rukutaajira. Oromoo teeysanii walirratti hin laalinaa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIyyaa iyya dabarsaa mootummaan Itoophiyaa ummata qeellam wallaggaa HELEKOPTERAAn rukutaajira. Oromoo teeysanii walirratti hin laalinaa!
AMAJJII 12,2019) Har’a sa’aa 5:00 fi 6:00 gidduutti #Helekoopterootniwaraanaa mootummaa EPRDF lama Godina Qellem Wallaggaa Gidaamii Qellem bakka Burii jedhamu irra gadi siqanii balali’aa turuu maddeen SBO ibsaniiru.
Helekopterri inni tokko akkuma darbeen, inni lammaffaa boodaan dhufe meeshaa gugurdaa sagaleen isaa ummata naannoo baaragse hedduu dhukaasuun kaampii dhaabbata Barihee Hagos jedhamu kanaan dura daandii baadiyaa hojjetaa ture qubsuma manneen moofaa barbadeessuu maddeen addeessan. Ammatti dhuka’aa Helekopterootni waraanaa mootummaa EPRDF darbatan kanaan nama irra balaan dhaqqabe hin baramne.
Haa ta’u garuu bakki itti dhukaasni kun ta’e ummati itti naannawee qubatee kan jiru ta’uu irraa sagaleen dhuka’aa kanaa hawaasa naannoo haalaan baaragsuu/jeequu fi sodaachisuu irraa Qellem dabalatee gandootni baadiyaa naannoo sanaa heddumminaan bosonatti baqatanii akka jiran ibsameera. Helekopterootni waraanaa sirnichaa gandoota naannoo sanaa irra baay’ee gadi siqanii balali’uun sagaleen ummata akka malees jeeqaa jiraachuu maddeen ni hubachiisu.
Dhuka’aa gugurdaa Helekopterooti mootummaa EPRDF har’a dhukaasan kanaan ummatni gandoota Saamboo, Giraayii Soongaa, Gaara Kormaa fi kkf buqqa’anii gara bosonaatti baqataniiru. Maanguddootnii fi ijoolleen haala kana keessa miidhamuun illee ibsameera. Kanneen osoo baqatanii caccabanis jiraachuun hubatameera.
Ummatni qe’ee isaa gadhiisee baqate kun mana isaa illee kan hin cufatin, horii isaa illee kan hin galfatin ta’uu gabaasa nu dhaqqabe irraa hubachuun danda’ameera.
Bakka nagaan jirutti, qaamni wal lolu hin jirretti Helekoptera waraanaan ummata gidduutti meeshaa gugurdaa dhukaasuun ummata nagaa sodaachisuu fi gooluu yoo ta’e malee hiika biraa hin qabu. Mootummaan ummata nan bulcha jedhuuf naatee qabaachuu qaba; kabajaan namummaas jiraachuu male.
Ummatni kun jijjiirama har’a biyyattii kana keessatti dhufe argamsiisuu keessatti aarsaa guddaa kafaleera. Galatni isaa kana ta’uun irra hin jiraatu.
Ebba hoteela gooticha daraaraa kafanaa lakkoofssa lammaffaa ebbisuuf farddeen warra keenyaa #ambooti garmmaamssaa jirra.
QEERROO OROMIYAA MALIF USTANI DUBII AMMA MOTUMMAAN ITTI JIRU KAN ILALATAN LATA? Sagalee Bosonaa fi Qeerroo iyyaa iyya waliif dabarsaa !!
ilaalaa yaalammii koo Oromoo Maalif Gowwaa taha?
1=Geetachoo Asaffaa fi Gareen isaa Otoo Tigraay mashalee qaamani mootummaa qabee seeratti dhiyeessu dhabamee jiruu.
2=Ummanni Tigraay hanga funyaaniitti hidhatee Meeshaa waraanaa Biyya keessaa saamaa turan kuufatanii lolaaf of qopheessaa jiru.
3=Naannoon Amaaraa /waraana 150,000 ol/leenjisee qopha’eera,Affaar,Somaalee,Gumuz,Kkf hundi bifa qinda’een hidhataniiru.Aggaammii kamiifuu of irraa qoluuf Qopha’aaniiru.
4=OPDO’n garuu WBO Abdii keenya .Kana booda oromoon oromoo hin ajjeesu jechaa Duula WBO irratti labsuun maal yaaddeetu OPDO’n?
Waraana hidhatee keessaa alaa oromiyaa target godhee meeshaa waraanaa itti nyaachifatee Oromiyaan harka qullaa tu’uu hubatee yoom akka nu weerraran karoorfachaa jiran eenyu akka harka duwwaa jala dhaabbatu yaadameetuu ?
OPDO’n uraanuu poolsiin oromiyaa meeshaa hin qabu nageenya oromiyaa tikkisuu hin dandeenye.WBO Hidhatee wabii oromiyaa taatee jirtu Makalakayaan akka isaan barbadeessu ifatti labsaniiru.
Yaroo gama hundaan oromoon harka qullaa ta’ee Habashaan akka oromiyaa deebi’ee weeraru opdon haala mijeessaafii akka jiran hubanneera.Oromoo waraanaan cabsuun karoora opdo tiin hin raawwatu.OPDO’n yaroo dhumaaf oromiyaa keessaa WBO balleessutti ofiif ishiitiif OPDO’n baduuf jirti.Hundii keessan arguuf jirtu.